Kedu otu esi mepụta profaịlụ backlink bara uru site na iji komputa na backlinks dofollow?
Ndị nwe obodo niile na-atụ nrọ ka ha hụ ndị ahịa ha ka ha nwee ike ịntanetị. Ọ bụ ya mere ha ji eme mgbasa ozi ahịa dị egwu nke na-agụnye njikarịcha search engine, mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze, dofollow backlinks generation, na na na. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ị ga-akọrọ ndị na-ege ntị, ị ghaghị ime ya.
Njikọ njikọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị njọ nke njikarịcha search engine. Njikọ dị n'ime ya dị mkpa iji bulie elu na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ ma dọta ndị ahịa nwere ike. Ha na-eme ka ọdịnaya gị hụ ndị na-elebara gị anya ma bulie nlọghachi azụmaahịa gị na ego.
Njikọ ụlọ inbound abụghị usoro sayensi ma ọ bụrụ na nataghachite sitere na saịtị PR ndị dị elu nwere ike ịpụta oke mgbagwoju anya maka ọhụrụ. Ọ dị mma, enwere ọtụtụ ndị ọkachamara backlinks dofollow dị na weebụ yana ndị ọkachamara nyochaa njikwa search na ndị na-ewu ụlọ, ndị ga-enyere gị aka inweta ezigbo njikọ ihe ọṅụṅụ sitere na saịtị PR dị elu.
N'isiokwu a, m ga-eso gị kọọrọ gị otu esi emepụta backlinks dofollow maka n'efu. Ọzọkwa, ebe a ị ga-ahụ ụfọdụ saịtị backlinks dị na dofollow nwere ike ime usoro nke ịmepụta njikọ ndị ọzọ nke ọma.
Ntanetị weebụ nke na-arụ ọrụ dịka dolinklow backlinks
N'ebe a ị ga-ahụ ndepụta nke ebe nrụọrụ weebụ ebe ị nwere ike nweta backlinks dofollow free n'ime obere oge. Aga m ekwurịta banyere ebe nrụọrụ weebụ dịka Microsoft, Facebook, Google, na ihe ndị ọzọ.
Tupu anyị amalite ikwu banyere isi mmalite ndị a, m ga-achọ ikwu na e nwere ụdị backlinks abụọ - dofollow na nofollow. Ụfọdụ n'ime saịtị PR ndị dị elu na-enye ma njikọ abụọ ndị a - Google+, YouTube, na ndị ọzọ. N'ụzọ dị iche, usoro ntanetị ndị dị otú a dịka LinkedIn na Facebook nwere ike ịmepụta nanị backlinks ọkọollow.
Na nkenke, backlinks dofollow bụ ndị na-agafe mmiri njikọ site na otu ebe gaa na nke ọzọ wee nyere aka ibuli usoro ntanetị site na otu isiokwu. Dofollow backlinks nwere ike ịmepụta ikikere ikike ma gosipụta Google otú isi iyi weebụ dị. Ntughari backlinks nofollow bụ njikọ ndị na-adịghị agafe ihe ọ bụla njikọ ihe ọṅụṅụ ma ọ dịghị emetụta gị na peeji nke ọkwa. Ma, ha ka nwere ike ime ka nkwado azụlink gị dị ike karị ma ọ bụrụ na ha si na ebe nrụọrụ weebụ PR dị elu.
Microsoft bụ web dị ịrịba ama isi iyi nke nwere otutu uru maka ndi oru sitere n 'uwa nile. Ọ bụ ya mere o ji dị elu PageRank. Inweta njikọ sitere na saịtị a, ị ga-eme ka ikikere ikike gị ma bulite aha ụlọ ọrụ Google.
Iji mepụta backlinks dofollow sitere na Microsoft, ị ga-aga site na usoro ndị a:
Mepụta akaụntụ ọhụrụ na Microsoft.
Banye ma gaa na ngalaba profaịlụ.
Mepee njikọ njikọ ma tinye njikọ gị na ederede arịlịka echere.
Iji mezue usoro a, pịa bọtịnụ "Save".
Google Plus bụ netwọk mmekọrịta nke Google. Ị nwere ike nweta akara azụ azụ dị mma site na isi iyi a site na ịgbaso usoro ndị a:
Nbanye na Google Plus iji akaụntụ Gmail gị.
Mepụta ọhụụ ọhụrụ maka blog gị.
Nyochaa ibe gị.
N'ikpeazụ, tinye njikọ gị na URL.
Pịa bọtịnụ "Save" Source .